Wargayska Marca Oo Waraysi Xiiso Badan Oo Uu Lionel Messi Bixiyay Ka Soo Xulay 15 Odhaahood Oo Muhiim Ah, Real Madrid, Neymar Jr, Aguero, Suarez, Koobka Aduunka, Mustaqbalkiisa Iyo Arimo Badan Oo Qayb Ka Ah. – GOOL24.NET
Wargayska Marca Oo Waraysi Xiiso Badan Oo Uu Lionel Messi Bixiyay Ka Soo Xulay 15 Odhaahood Oo Muhiim Ah, Real Madrid, Neymar Jr, Aguero, Suarez, Koobka Aduunka, Mustaqbalkiisa Iyo Arimo Badan Oo Qayb Ka Ah.
Kabtanka xulka qaranka Argentina ee Lionel Messi ayaa bixiyay waraysi aad u dheer oo dhinacyo badan taabanaya, waxaana waraysigan si gaar ah xog muhiim ah uga soo dhex saaray wargayska Marca oo ka soo baxa caasimada dalka Spain ee Madrid. Lionel Messi ayaa waraysigan lagu waydiiyay arimo aad u badan oo kooxdiisa, qarankiisa iyo dhacdooyin kale oo kubbad cagta ah wax looga waydiiyay.
Lionel Messi ayaa waraysigan si cad ugu sheegay in ay isaga wax aad u adag ku tahay in uu ka fikiro ka bixitaanka Barcelona waxaana la waydiiyay haddii ay suurtogal tahay in saaxiibkiisa Aguero uu Manchester City kula ciyaari karo balse waxa uu si sahlan u sheegay in haddiiba ay dhacdo in Aguero ay wada ciyaaraan in ay noqon doonto mar ay Barca isaga la soo saxiixatay.
Lionel Messi ayaa sidoo kale sheegay in dhiiro galin wayn uu ka qaado marka uu arko Real Madrid ku guulaysanaysa koobka La Liga ama soo gaadhaysa finalka Champions League. Messi ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday koobkii uu sida ugu farxada wayn ugu dabaal degay.
Haddaba shabakada Gool24.net ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa 15ka qodob ee uu wargayska Marca ku soo koobay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee uu Lionel Messi waraysigan kaga hadlay halkan ayaanad kaga bogan kartaa.
1-Natiijooyinka Real Madrid ay Hesho: ” Real Madrid waxay haysataa wax iyadu aad iska leedahay, kulan ayay si xun u ciyaaraan wayna guulaystaan, way ka socdaan anagana qiimo ayay nagu kacdaa”.
2- Ka hadhitaankii Champions League ee kulankii Roma: “Qashin ayuu ahaa”.
3- In aad noqoto xidiga taariikhda ugu fiican? ” Anigu ma xiiseeyo in aan noqdo kan taariikhda ugu fiican, wax ay badalaysaa ma jirto, anigu ma dalbado in aan noqdo kan ugu fiican, ka labaad ee ugu fiican, ka saddexaad ee ugu fiican ama ka afraad ee ugu fiican”.
4- In Real Madrid final kale oo Champions League ah soo gaadhay: “Aniga way i dhiiro galisaa in aan arko Real Madrid oo final kale oo Champions League ah soo gaadhay oo aan arko iyaga oo horyaalada ku guulaysanaya”.
5- In Neymar ku Biiro Real Madrid: “Wax dhibaato ah ayay noqon doontaa in la arko Neymar oo Madrid jooga, dhibaato wayn ayay anaga dhamaantayo nagu noqon doontaa, taasna haddaba isaga ayaan u sheegay”.
6- Koobkii Uu Inta Ugu Badan U Dabaal degay: ” Koobkii ugu horeeyay ee Champions League ahaa ee aan Barcelona kula guulaystay”.
7- Geesinimada Luis Suarez: ” Isagu wuu ordaa, aniga ayuu i riixaa, qof kasta ayuu riixaa, goob kasta ayuu ordaa, waa shaqsi aad halis u ah, laakiin waa shaqsi cajiib ah”.
8- Habka cusub ee uu u ciyaaro: ” Waxyaabo badan oo cusub ayaan la qabsaday, waxaan dareemaa in aan qarxayo oo aan aad u dheeraynayo, maalmahan danbe waxaan si taxadarleh u doortaa ciyaarta aan samaynayo”.
9- Haddii Ka Ciyaaroy Ahaan Barcelona Uga Bixi Karo: ” Waa halkee goobta ka fiican Barcelona? Anigu uma baahni in aan badasho, aniga wax aad u adag ayay igu noqonaysaa in aan Barcelona ka baxaa”.
10- Suurtogalnimada uu Aguero ugla ciyaari karo Man City: “Anigu uma ciyaari doono City, haddii aan Aguero la ciyaaro waxay sababtu noqon doontaa in Barcelona ay isaga la soo saxiixato”.
11- Midka uu jeclaan lahaa in uu ka hor yimaado Real Madrid ama Barcelona : ” Barcelona waxay u ciyaari doontaa si ka duwan Real Madrid”.
12- Ku Guulaysiga La Liga + Copa Del Rey mise Champions League: “Anigu waxaan doonayaa in sanad kasta aan ku guulaysto Champions League, in sanad kasta aan ahaado Championska horyaalka, waxaan doonayaa in aan guulaysto, kaas ayaa ah waxa aan doonayo”.
13- In Spain Ay Finalka Koobka Aduunka Soo Gaadhi Doonto: ” Ciyaartoyda ay haystaan, waa mid ka mid ah kuwa ugu cad cad in ay koobka aduunka ku guulaystaan, waa koox ka tamar badan sida ay Brazil tahay”.
14- In Qarankiisa Argentina bilaa Samir Yahay: ” Koox kasta oo saddex final soo gaadhay waa la qiimayn lahaa, laakiin waxay noogu yeedhaan bilaa samir, waxaan jeclaan lahaa in aanu noqono sida Germany oo aanu ka shaqayn lahayn”.
15- Maxaad badali lahayd koobkii aduunka ee Germany aad guuldarada kala kulanteen? ” Fursadihii aan helay, sababtoo ah waxaan arkay muuqaalka isla markaana si fiican ugumaan garaacin”.